WICShopper ayaa la sii daayay ka qaybgalayaasha barnaamijka Mass. Wachusetts WIC bishii April ee 2015. Toddobaadkii ugu horeeyay ee 6 barnaamijka ayaa la heli karaa, iyadoo qoysaska 15,000 ay ku biireen oo isticmaaleen WICShopper oo ku saabsan wareega wareegga 80,000!
Barnaamijka WIC ee Massachusetts wuxuu kaloo isticmaalaa WICSmart, mashruuca qalabka mobile-ku-salaysan nafaqada ee JPMA. Guji halkan si aad u akhrido wax badan oo ku saabsan iskaashiga u dhaxeeya JPMA iyo Massachusetts WIC.
"Weydiiso Massive WIC" blogka ayaa ka buuxa talooyin iyo talooyin ku saabsan hooyooyinka barnaamijka Mass. WIC. Laga soo bilaabo niyadjabka cadaadiska ilaa cuntada, weydii Mass WIC wax walba oo uu qof walba leeyahay.
Anigu waxaan ahay hooyo afar caruur ah waxaanan ka tirtirayaa wargeyska waxa aan leeyahay. App Tani waxay ahayd mid weyn. Waad ku mahadsantahay hoosta wadnaha. Waxaan ka soo jeednaa Massachusetts iyo gabarkayga 9-da ah waxay jeceshahay in ay hubiso waxa aan awoodno oo aan heli karno.
Waxaanu siinay WICShopper raashin badan oo raaxo leh si loogu kariyo qoyskaaga oo xiiso leh oo dhadhan fiican leh. Ku raaxeyso intaad raadineyso dhadhan cusub. Sii cuntooyinkaas isku day ah - waxay si gaar ah loogu talagalay inay daboolaan baahida hooyooyinka mashquulka ah.